Ciidamadii Kismaayo & Baraawe isugu lugeeyay oo soo gaaray Muqdisho | Dhacdo.com
Home Dhacdooyinka Ciidamadii Kismaayo & Baraawe isugu lugeeyay oo soo gaaray Muqdisho
Ciidamadii Kismaayo & Baraawe isugu lugeeyay oo soo gaaray Muqdisho
11 askari oo ka mid ahaa 16 askari oo dhawaan ka lugeeyay Magaalada Kismaayo, tageyna Degmada Baraawe ee Gobolka Shabellaha Hoose ayaa soo gaaray Magaalada Muqdisho.
Ciidamadan oo ka tirsanaa Daraawiishta Jubbaland ayaa isaga tagey Magaalada Kismaayo, ka dib markii ay ka gadoodeen maamulka uu Madaxweynaha ka yahay Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).
Cabdirsaaq Cabdi Cumar oo hoggaaminayay askartan ayaa wuxuu xaqiijiyay inay dooni ka soo raaceen Degmada Baraawe, kuna yimaadeen Xeebta Jazeera ee duleedka Magaalada Muqdisho.
Cabdirsaaq Cabdi Cumar ayaa wuxuu sheegay ka dib, ka bixistoodii Magaalada Kismaayo inay ku dhiiradeen inay soo maraan dhul ballaaran oo Ururka Al Shabaab uu ka arrimiyo, dagaalana ay ku qabsadeen. Kismaayo ayuu sheegay inay uga sii gudbeen dhinaca Degmada Jamaame ee Gobolka Jubbada Hoose, isla-markaana ay kula dagaalameen maleeshiyada Al Shabaab. Dagaalkaas ayuu sheegay in looga dilay shan askari, iyagana ay ku dileen tiro ka mid ah maleeshiyada Shabaabka.
Isagoo la hadlayay Radio Kulmiye ayuu sheegay in meel dhexe ay hadana ku wada dagaalameen Shabaab, wixii ay gaarsiin kareyna ay gaarsiiyeen, hadana dagaal kale ayuu sheegay inuu ku qabsaday Deegaanka Kuunyo Barrow oo hoos-tagga Degmada Baraawe, loogana dhaawacay hal askari, sidaasina ay ku gaareen Degmada Baraawe.
Sidoo kale waxaa uu sheegay markii ay muddo jooggeen Degmada Baraawe inay ka soo raaceen dooni, taasoo sida uu sheegay ay ku yimaadeen Xeebta Jazeera.
Su’aal ahayd in badda uu dagaal ku qabsaday iyo in kale ayuu sheegay inaanay badda kula kulmin weerar uga yimid Shabaabka, ha yeeshee ay weerarada Shabaabka ahaayeen kuwo ku koobnaa intii ay safarka dhulka ku soo jireen. Askarigan ayaa sidoo kale xaqiijiyay in illaa afar boqol oo kiilo mitir (400km) ay soo lugeeyeen.
Mar la weydiiyay iyagoo tiro yar oo askar ah waxa ku khasbay inay ku dhiiradaan in ay soo dhex maraan dhul uu Shabaabka ka arrimiyo ayuu sheegay inay go’aankaas ka arkayn khalafsanaanta Maamulka Jubbaland.
Askarigan oo wax laga weydiiyay in safarkooda ay ka warqabtay Dowladda Somaliya ayaa carabka ku adkeeyay inaysanba jirin cid ka war heysay, waxaana uu yiri “Walaahi inaysan cid naga war hayn, ma garatay. Cid naga war haysay malahan.”
Isagoo hadalkiisa wata ayuu yiri “Rag go’aan soo qaatay oo dhawaaqii uu dhawaaqay Ra’iisal Wasaaraha Somaliya yiri cid walba ha is xoreyso, go’aankaasaan fulinay, ha yeeshee wax garab ah waan weynay.”
Mar uu ka jawaabayay su’aal ahayd inta maalmood ee safarkan uu ku qaatay ayaa wuxuu yiri “Haa dhawr maalmood ayay nagu qaadatay, sax lix maalmood ayay nagu qaadatay.”
Su’aal kale oo xiiso laheyd, lana weydiiyay askarigan ayaa ahayd, sida ay ugu suurtagashay inay Magaalada Muqdisho soo galaan iyagoo hubeysan, maadaama magaalada ay ciidan amni ka shaqeeyaan, kontoroolo amniga lagu xaqiijiyana ay ku yaalaan ayaa yiri “Rag baa nala soo xiriiraayay oo Ciidanka Xoogga Dalka ka tirsan, oo aqoonsiyo leh, raggaasaa na soo waday.”
Xagee idinka soo wadeen oo la weydiiyay ayaa wuxuu Cabdirsaaq Cabdi Cumar ku jawaabay “Barta doonta uga soo degnay ayay nagu sugaayeen.”
Cabdirsaaq Cabdi Cumar ayaa daboolka ka qaaday markii ay Magaalada Muqdisho yimaadeen inaanay helin daryeelkii ay uga baahnaayeen Taliska Ciidanka Xoogga Dalka & Wasaaradda Gaashaandhiga Somaliya, dadaalo kasta oo ay sameeyeena ay waayeen wado u maraan xiriirka masuuliyiintaasi.
Ugu dambeen Cabdirisaaq ayaa wuxuu ugu baaqay Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka, General Odawaa Yuusuf Raage in uu soo siiyo teleefanadiisa xiriirka dadka, isla-markaana uu soo dhaweeyay Ciidamada Daraawiishta ee Jubbaland ka soo goystay.